Man v Machine: Kombiyuutaro Cook Can, Qor oo Rinji Better Us Badan? - Rule News
Man v Machine: Kombiyuutaro Cook Can, Qor oo Rinji Better Us Badan?
sirdoonka Artificial hadda ku guuleysan karto ciyaar, aqoonsan wejigaaga, xitaa racfaan ka tigidh la dhigto aad. Laakiin sidaas samayn kara alaabta xataa dadka ka heli adag?
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Man mashiinka v: kombiyuutarada kariyo karaa, qori iyo rinjiga fiican naga badan?” waxaa qoray Leo Benedictus, for The Guardian on Saturday 4-tii June 2016 08.00 UTC
Mid ka mid ah video, ii, wax walba oo is beddelay. Waa footage ka ciyaarta Atari jir Hakadyada, ka mid ah meesha aad simbiriirixan taki bidix iyo midig weheliyaan hoose ee shaashadda, isku dayaya in ay baabbi'in lebenkii by Korsiga kubad iyaga la soo galo. Waxaa laga yaabaa inaad ku akhrido ciyaaryahan ee ciyaarta: geynta ah ee ay DeepMind, shirkadda British macmal sirdoonka oo AlphaGo barnaamijka sidoo kale garaaceen, mid ka mid ah ugu weyn ee abid Tag ciyaartoyda, Lee Sedol, horaantii sanadkan.
Waxaa laga yaabaa in aad ka filan computer ah in ay ku fiicanahay ciyaaraha computer noqon? Marka ay u ogaadaan waxa la sameeyo, waxay u si joogto ah u sameeyaan si degdeg ah iyo in ka badan aadanaha kasta. ciyaaryahan Hakadyada DeepMind ee waxba ma ogayn, Si kastaba ha ahaatee. Waxaa la ma barnaamijkii la tilmaamo ku saabsan sida shuqullada ciyaarta; waxaa la aan xitaa u sheegay sida loo isticmaalo kontaroolada. oo waxay lahayd All ahaa image ku saabsan screen iyo amarka in ay isku dayaan si ay u helaan dhibcood badan intii suurto gal.
Watch video ah. Marka hore, taki u ogolaanaysaa dhibic kubada lagay ah, og fiican lahayn. Ugu dambayntii, kaliya yaraa oo ku saabsan, waxaa garaacana kubada dib, baabbi'iyaa leben ah iyo helo hal dhibic, sidaa daraadeed waxa uu aqoonsan this iyo waxa ka badan inta badan sameeya. Ka dib markii ay tababar laba saacadood ', ama ku saabsan 300 kulan, waxa ay noqotay si dhab wanaagsan, ka fiican tahay adiga ama waxaan jiri doonto weligeed. Markaasuu, ka dib ku saabsan 600 kulan, wax ka heli spooky. geynta wuxuu ku bilaabmayaa waxs kaalinta isla, ka badan iyo in ka badan, si ay u qodaan dhex lebenkii galay meesha bannaan ee ka dambeeya. Marka waxaa, sida ciyaaryahan kasta Hakadyada ogyahay, kubad soo kaban doonto ku dhawaad ​​muddo ah, ururinta dhibcood free. Waa istaraatijiyad wanaagsan in computer ayaa u yimid oo la on gaar ah.
"Marka cilmi our arkay this, in si dhab ah iyaga naxay,"CEO DeepMind ee, Demis Hassabis, u sheegay dhagaystayaashii ah shir technology ah ee Paris. Waxaad awoodi kartaa daawato uu bandhig, aad, oo maqla qosol iyo sacab marka mishiinka ayaa xisaabin doona istaraatijiyad ay dhexdeeda Godoo kale. computer ayaa noqday caaqil, waxoogaa nala mid ah.
"Sirdoonka Artificial" waa kaliya oo ku saabsan ugu da'da weyn oo ugu xulku Weedhahan tijaabadooda Kombuyuutarada oo dhan. Fikradda ugu horreeyey waxaa si dhab ah lala by Alan Turing in Kombuyuutarada Makiinado Oo Intelligence, ka 1950 warqad kaas oo uu soo jeediyay waxa noqday kuwa loo yaqaan imtixaanka Turing ku: haddii mashiin aad ka dhaadhiciyo karo wada hadalka in ay ahayd aadanaha, waxaa la sameynayo sida ugu badan ee aadanaha kasta oo ay kari karin inuu cadeeyo waxaa la dhab ah fikirka. Laakiin AI dheer la aan guud ahaan loo isticmaalo ilaa 1955, Goorma xisaab American John McCarthy jeediyay shir for khubaro. Tani waxay ka dhaceen sanadka soo socda, iyo tan iyo markaas berrinka ayaa ordi on qiyaas ahaan wareegga laba sano ah oo ah waali ka quusanina. (Cilmi yeelan muddada cusub - "AI qaboobaha" - si ay u sharxaan kooxaha ay ka mid ah fashion. The 1970 iyo 1990 waxay ahaayeen kuwo si gaar ah u adag.)
Maanta waxaa jira waali cusub, kaas oo u muuqda kuwa kale ka duwan: waxaa haboon in aad jeebka. phone A garaaci karaan horyaalka adduunka chess ah, aqoonsan songs raadiyaha iyo sawiro carruurtaada, Oo aad codkaaga turjumo luqad kale. robot Nao halkan la sawiran Yotam Ottolenghi socon kartaa on labada lugood, hadlo, heli kubada a iyo xataa qoob ka. (Waa robot ah, in kastoo, ma AI: ma qorshee karaa menu ah.)
Maqal ah oo ku saabsan horumarka ee AI, aadan u baahan khabiir ku ah in uu kuu sheego in ay ku faraxsan, ama cabsi. kaliya Waxaad bilaabi si aad u hesho dareen ah: sirdoonka halkan waa. Waxaa cad Google helay dareen ah, aad, maxaa yeelay waxa ay soo iibsatay DeepMind for $ 650m a xamanayaa. In 2013, Facebook bilaabay mashruuc gaar ah, qorsheyneysa inay horumariyaan luqadda aqoonsi wajiga iyo dabiiciga ah ee goobta. Horumarinta ayaa durba bilaabay shaqo on chatbots caaqil, oo dadka isticmaala Facebook awood u yeedho isticmaalaya adeega ay Rasuulka noqon doonaa.
Ilaa hadda, kombiyuutarada ma ay "caqli" at dhan, ama ciriiri ah oo keliya si. Waxay joogey wanaagsan ee hawlaha fudud in na la yaabtid, sida xisaabta, laakiin xun ee kuwa aan qaadan for siiyo, taas oo soo baxayso in si dhab ah u adag. Ficilka of socodka waa wax aalado casri ah wax ku bartaan sida dhallaanka iyo weli halgan kula; hawlaha aasaasiga ah pottering sii riyooyin fog. "Mid ka mid ah tusaale ahaan waa iska istareexsan ay adiga ama waxaan ka dhigi kara koob shaah ah jikada qof kale,"ayuu yidhi Professor Alan Winfield, roboticist a at the University of West of England. "Ma jiro robot ah oo ku saabsan meeraha in this samayn karin."
Ma jiro robot ah caalamka in laga yaabo inuu koob shaah ah jikada qof kale
Si loo fahmo sababta isagoo aadanaha waa sidaas u adag tahay, ka feker sida laga yaabo in aad ka hesho computer ah in la aqoonsado dadka ka soo sawiro. aan AI, aad leedahay in la ogaado sida aad marka hore u samayn naftaada, si ay barnaamijka kombiyuutarka. Waxaad si ay u ururiyaan oo ka feker dhan qaabka ay suurto gal, midabo iyo qaabab wejiyadooduna, iyo sida ay u beddeli iftiinka iyo xaglo kala duwan - oo aad leedahay si ay u ogaadaan waxa la taaban karo iyo waxa dhoobo kaliya on siku. Iyadoo AI, uma baahnid inaad si ay u sharxaan: kaliya ku siin buur xogta dhabta ah in computer ah oo ha bartaan. Sida aad ku qorshayso software waxbarashada ayaa weli Qasdi kasta fahmayn, gobolkii a yar kuwa cilmiga kombuyuutarka ka doondooneen ka dib, laakiin waxa ay iska cadahay waxa ay heshay on in guusha ay hindisaan dhismeedka of data-processing ku salaysan Itoob on dhismayaasha ee maskaxda. (Tan waxa loo yaqaan "waxbarashada qoto dheer".) Sida buuraha xogta dhabta ah, sidoo, taasi waxa weeye waxa Google, Facebook, Amazon, Uber iyo kuwii kale oo dhan dhici in ay ku dhawaad ​​been.
Marka marxaladdan, aynaan weli garan maayo oo isticmaalaa of AI noqon doono ugu wanaagsan. Josh Newlan, coder California a shaqeeya Shanghai, helay caajisaan la dhagaysto wicitaanada shir lahayn, sidaa uu qaar ka mid ah software si aad u dhegaysato isaga u dhisay. Hadda, mar kasta oo magacaaga Newlan ee la Xuso, uu computer dhakhso isaga soo diro qoraalka ah-daqiiqo qeybtii ugu danbeysay, sugaysaa 15 seconds, markaas ciyaara duubo isaga ku yidhi, "Waan ka xumahay, Anigu ma aan ogayn oo aan makarafoonka ku jiray carrab la '. "Sanadkii la soo dhaafay, Josh Browder, wiil dhalinyaro ah oo British, dhisay a qareen macmal ah oo lacag la'aan ah in rafcaan ka dhanka tikidhada la dhigto; in uu qorsheeynayo in kale dhiso si uu u hago qaxootiga iyada oo loo marayo nidaamka sharciga ah shisheeye. fursadaha waa ... Well, waxaa laga yaabaa in isku geynta ah tirin karaa fursadaha.
Sidaas maskaxda mashiinka maalin maalmaha ka mid suuroowdo doonaa noo gaar ah? The cilmi waxaan ku hadlayaa in ay yihiin kuwa dhawrsada, oo waxay qaadan xanuun in ay xoogga saaraan waxa mashiinada ay ma aan samayn karo. Laakiin waxaan go'aansaday inuu ku riday AI inay imtixaanka: waxay qorshayn karaan hadhuudh ah iyo sidoo kale Ottolenghi? waxay rinji karaa sawirka? Ma technology weli kiimikaysan caqli - ama loo bilaabo in uu noqdo caaqil, for dhabta ah?
imtixaanka karinta The
Well, Waxaan odhan doonaa ma aha xun. Aadanuhu u adeegi i sii xun. Inkastoo si Xaq magaca in IBM ayaa Kariyaha Watson siinayaa saxan this ("Chicken Beerka Savoury Suugada") wuxuu ku saabsan yahay sida appetizing sida u qalmaa.
Si aad u noqoto suurad wanaagsan oo in kuugga Watson, iyo in Guardian Weekend ee u gaarka ah kuugga-columnist Yotam Ottolenghi, Ayaan soo dhigay hawl xad ah. Waxaan weydiistay inaan saxan ku salaysan afar ah maaddooyinka in u muuqday in meel iska dhow midba midka kale: Faasiqnimadooda Darteed digaag, ciir Greek, wasabi iyo udib. Waxay ku dari karaysaa wax kasta oo kale oo ay jecel yihiin, laakiin afar kuwii lahaa in ay saxan dhamaystirtay, oo aan kariyo lahaa oo wax cun. Kariyaha Watson oo aan ka waaban, isla i siiyeen laba suugada baastada. Ottolenghi ka circumspect. "Markii aan helay caqabad ku ah waxaan mooday, "Tani ma in ay ka shaqeeyaan,' "Ayuu ii sheegay.
Waxaan u maleeyay in isla. Ama ugu yaraan waxaan u maleeyay in aan ku dhamaan doono ilaa cunista laba suxuunta in u suurtagashay in ay noqon OK inkastoo waxyaabaha ay, halkii, sababtoo ah iyaga ka mid ah. Dhab ahaantii - oo aad ii malayn doonaa gurguurta oo a, laakiin sidaas waxa - recipe Ottolenghi ahaa dajinta: beerka iyo basasha iyo hoos u udib a, adeegay tufaax, dabocase, baytaraafka oo chicory slaw, faashad wasabi iyo fadhi a. saxanka ayaa laga yaabaa in dareen yar oo warqad, laakiin waxaan wada baabbi'in dareen plateful in element kasta lahaayeen. (Oo vinaigrette awgii la ciir iyo wasabi halkii khardal: dhab ah, siin isku day ah.) Ottolenghi ii sheegayaa karinayo waa uun gaaban shaarbo of publishable a.
Taasu waa, saxan in isaga iyo kooxdiisa saddex maalmood qaatay si kaamil. Waxay ahaayeen awoodaan in ay dhadhamiyaan iyo wada hadlaan dhadhan, qaabab, midabo, heerkulka, si Watson ma karo - inkastoo ay jireen "wada hadal" oo ku saabsan ku daray in farsamo-celin ah mustaqbalka, Kuugga injineer hogaanka Watson ayaa, Florian Pinel, ii sheegay. "Cuntadani waa wax adag sida a,"Ottolenghi sheegay. "Waa adag tahay xitaa ii ah in la fahmo sida computer ah u dhawaanina lahaa."
Yotam Ottolenghi iyo suxuunta Kariyaha Watson ayaa Sawir: Jay Brooks for the Guardian
Watson markii ugu horaysay la dhisay by IBM inuu ku guuleysto halis gameshow telefishanka! in 2011. In siyaabo qaar ka mid ah waxa uu ahaa tartan habaabin, waayo computer ah qaybta adag ee kediska ah waxaa loo fahmo su'aalaha, iyadoo aan ogayn jawaabaha; aadanaha, waa jidka kale. Laakiin Watson ku guuleystay, iyo technology waxay bilaabeen inay in la dalbadaa meelo kale, oo ay ku jiraan sida kuugga a, guud ahaan cuntada cusub ku salaysan 10,000 tusaalooyin dhab ah laga qaaday Cunno wanaagsan magazine.
First software lahaa "liqi" cuntada, kuwaas oo, sida kooxda Watson ku dhejiyey. Dad badan oo xisaabinta galay fahmo waxa ay maaddooyinka waxay ahaayeen, sida ay u diyaarin jiray, sida dheer ay la kariyey for, si ay u awoodaan si ay u sharxaan sida loo isticmaalo in suxuunta cusub. (Geedi socodka weli tegi kartaa faraha. Hadda Kariyaha Watson ku talinaysaa qayb loo yaqaan "Mollusk", taas oo helpfully sharxayaa waa "lixaad buuxa dhererka- album by Ween".)
Dhibaato weyn ayaa la isku dayayo in la siiyo mishiinka dareen dhadhanka. "Waa sahlan ku filan computer ah si ay u abuuraan isku jira sheeko a,"Pinel sheegay, "Laakiin sida ay u qiimeeyaan karaa mid?"Watson waxaa la baray si ay u eegaan qayb kasta sida isku-dar ah xeryahooda dhadhan gaar ah - kuwaas oo ay jiraan kumanaan - ka dibna in la isu geeyo waxyaabaha lahaa xeryahooda ee caadiga ah. (mabda 'Tani, cuntada ka garab, waxaa sidoo kale ka mid ah dadka la aasaasay.) Ugu dambeyntii, software ah abuuraa tilmaamaha tallaabo-tallaabo ka dhigi dareen cuntokariyihii ku ah aadanaha. Muhiimadu waxay saran tahay kadis ah halkii qorshaynta cuntada wax ku ool ah. "Kokken Watson waa run ahaantii waxaa jira in aad loo Waxyoodo ahayn,"Pinel sharxayaa. karinayo kasta yimaado la xusuusin ah in ay "aad isticmaasho hal-abuurka iyo xukunka".
Oo anigu waxaan u baahan tahay inaad. Tallaabada ugu horreysa waa in ay "rooti dhir guri-caleen", taas oo keliya ma aha fikrad fiican. Baan, wax ku ool ah, doofaarka la'ahay-kariyey xawaashka iyo hilibka lo'da RAGU, oo ay ku jiraan oo dhan afar ah maaddooyinka aan, weli Watson dilalka sidoo kale waxaa ka mid ah qajaar iyo dhawraa ii sheegin in ay "xilli la allspice", taas oo aan diido in aan sameeyo on mabda'a. Dhamaadka, Waxaan leeyahay Suugo hodan ah oo leh dhadhan ah halkii ay ku dhow yahay inuu ku farmyard, laakiin ma uneatable. Waxaan uma dhadhamin karaa wasabi ama dib udib ah, oo aan ahay oo ku saabsan farxeen.
Yotam Ottolenghi la robot Nao amaah xushmad ee dugsiga hoose Xeber, London. Sawir: Jay Brooks. Attam: Lee Flude
Watson waa xariif ah iyo hawsha waa adag, laakiin diyaar u ah ayaa sheegay in mar dambe waa ka yara oo xiiso badnayn oo cunto waxaan ahay, ilaa Ottolenghi iga joojiyo. "Waxaan qabaa fikradda ah gaabis-karinta Faasiqnimadooda Darteed ay la qayb ka mid ah hilibka waa weyn,"Ayuu yidhi. "Waxaa sii xoogeysanayo dhadhanku. Wax walba isugu iman doonaa. Haddii aan heli lahaa inuu ku soo bilowdo oo bayaan la iskadeyn, cad ciir ah aan ku haboonayn - laakiin waxaa jira inaan ka tagayo maqaarka orange ah, a yar oo dhir udgoon. Uma maleynayo waa cunto miidhan ah oo aad u xun. Waxaa laga yaabaa inay ka shaqeeyaan. "
Verdict Watson dhuuntaa weirdness ee Cuntadan, laakiin Ottolenghi iyaga ka dhigaa inay u gabyi.
Imtixaanka qorista wuxuu
yar saar Wordsmith soo socda si ay u mashiinada kulane ee IBM iyo Google, iyo waxa ay u muuqataa sida computationally sare sida calculator jeebka. Oo weliba halka Watson haleel la'aan iyada oo ay barasho, Wordsmith haatan waa shaqaynayaa. Haddii aad ka akhrisan wararka suuqa saamiyada ka Associated Press, ama Yahoo ayaa saxaafadda sports, waxaa jira fursad wanaagsan bay kula tahay doonaa iyagu waxay ku qoran qof.
Wordsmith waa qoraa macmal ah. Developed by shirkad North Carolina yeedhay Automated Fahanka, waxaa plucks ku Oofirna ugu xiisaha badan ka dataset ah oo iyaga u adeegsanayaa si uu u qaabeeyo maqaal (ama email, ama liiska alaabta). Marka ay timaado guud ahaan news weyn, waxa uu u adeegsanayaa af more caadifadeed. Waxaa kala duwan yeerista iyo Saan si ay u sameeyaan ay shaqo dheeraad ah oo la akhrin karo. Xataa madax sare ah oo robot sirgaxan yeelan karaan isticmaalka ay, laakiin qoraal ah akhristayaasha aadanaha waa in ay ahaadaan siman. ilaa daqar in qalab cod-aqoonsi ah sida Amazon ee Echo, Wordsmith xitaa ka jawaabi karaan su'aal hadlay aadanaha - oo ku saabsan waxqabadka ka mid ah maal-, dhihi - jawaab ah uga fikiraya hadlay, ku dhawaaqay waxa xiiso ugu horeysay, iyo ka tago waxa ma aha xiiso at dhan. Haddii aadan ogaan trick ah, aad u malaynayso kiiska 9000 ay soo gaareen.
trick waa this: Wordsmith sameeyaa qayb ka mid ah qoraal in dadka ma ogsoona waa u fududahay. Locky Stewart ka Automated Fahanka i siinaysaa tutorial ah. Waxaad ku qori galay Wordsmith xukun sida, "Tirokoobyada cusub ABC ayaa muujinaya in wareegga New York weyddiista ayaa kacay 3% ee April. "Markaas hareerahaaga ciyaaro. The 3% ayaa yimid ka data, si aad u dooro erayga "kacay" iyo qori caadiga ah, loo yaqaan a "laan", taas oo u beddeli doonaa erayga "kacay" in weedha ah "toogtay ilaa" haddii boqolkiiba ka badan yahay 5%. Markaas waxaad ku kori "kacay" si ay u noqdaan "dhacay" haddii boqolkiiba waa negative. Haddii boqolkiiba waa -5% ama ka hooseeya, "Kacay" noqdo "hoos".
Ka dibna waxaad u quudiyaan micne ah. Sidaas "hoos" ayaa sidoo kale noqon "dhacay maratay by" awood. "Wareegga The weyddiista ee" waxay noqon kartaa "wareegga at wax weyddiista". "Toogtay ilaa" waxay noqon kartaa "ugu duulay" iyo wixii la mid ah. Markaas waxaad ku dari weedho ka badan, laga yaabee ku saabsan gaadiidka online, ama ku saabsan oo maalmo 'koobi print iibin fiican, ama ku saabsan barbardhigo sanad-on-sano. Markaas waxaad ka heli xariif. Inaad u sheegtaa Wordsmith in marka hore ku riday weedho la macluumaadka ugu mudani in, qeexay laga yaabaa in sida kuwa kasoo muuqdo isbedelka ugu weyn boqolkiiba. Waxaa laga yaabaa in aad ku dari laan si ay sheegayaan in ay sabab u yahay "waxqabadka ugu fiican / xumaa ka mid horyaal tayada". Jahannamo, aad xataa u bari kartaa qaar ka mid ah tabaha Fleet Street jir, si haddii wareegga halaagsamo gabal bilaabmin "Editor Charles Kane ayaa wajahaya dhaleeceyn kulul sida", laakiin haddii wareegga uu leeyahay "kor u toogtay" uu noqdo "Charles Kane ayaa aamusiin dhaleecayn la news in". Geli "dheeraad ah" ama "mar kale" ama "sii" haddii aad wax la mid ah laba bilood oo isku xigta.
"Sirdoonka macmal ah ayaa dhab ahaantii waa sirdoonka aadanaha in la dhiso shabakad ee macquulka ah,"Stewart ayaa sheegay in, "Network isku aad isticmaali lahayd marka ay qoraal sheeko. Waxa laga yaabaa inay la soo saaray 10 ama 15 sano ka hor, in code, laakiin si ay u shaqeeyaan miisaanka this ayaa suuragal ah keliya waayadan dambe. "Sida iska cad waxa ay qaadataa waqti dheer si ay u diyaariyaan maqaal ku saabsan Wordsmith ka badan in ay qoraan hal conventionally, laakiin marka aad saas u yeeshay, kombiyuutarka daabici karaa sheeko wargeyska wareegga cusub bil kasta, on wargeyska kasta, seconds helo macluumaadka gudahood. Waxay daabacaan kartaa malaayiin sheekooyinka ku daqiiqo - ama daabacaan qaar ka mid ah oo kaliya oo ka mid ah, haddii xogta ma gaadho marinkii ah Siiyey newsworthiness. Sidaasay u noqdo editor ah oo otomaatik, aad, la dhadhankii hagaajin karo in si dhamaystiran, inta jeer iyo kacsanaan.
Wixii hawl Wordsmith ee, Waxaan u soo jeedin kubada cagta: waa beer in ay soo saartaa badan oo xogta iyo leedahay qornaa in uu doonayo articles shakhsi. Guardian qoraa kubadda cagta Jacob Steinberg mutadawiciin in ay qaataan on computer ah, oo anna waxaan ku siin miis ka xaqiiqooyinka ka danbeeyay Premier League: booska horyaalka xilli ciyaareedkii hore iyo meel xilli at Christmas iyo dhamaadka, gool, waxaana laga dhaliyay, top magaca ugu goolasha badan iyo guud ahaan, Qiimaha kala iibsiga xagaaga iyo xigasho ka ahaatay tababaraha.
Shaqeynta keliya ka xog this, computer iyo aadanaha waa in kasta oo qori u eegis lagu sameeyo xilli koox siiyey. Steinberg doorto Leicester City oo ku salaysan in tirada ay tahay in ay ku jiraan sheeko in qof kasta u arki lahaa. Wordsmith uma baahna in la doorto. Waxay samayn doonaa oo dhan 20.
Oo xaqiiqda computer iyo dadka labadaba si deg deg ah soo saaraan shaqada arrin la mid ah:
Labada Steinberg oo Wordsmith samatabbixin weedho horeysay riwaayado. Waxaa laga yaabaa in isha ku heysa inay ka dhawaajiyaan dhab ah, Automated Fahanka isticmaalaan qaar ka mid ah tabaha xariif ah in ay ku riday dareen galay article dambe ee, astutely ahayna in Leicester ayaa "ayaa rajeynaya inay ku dhameysato top ah 10 ka dib markii 14-kii meel ku dhameysatay xilli ciyaareedkii hore ". Waxaan eegi dhex articles kale Wordsmith iyo Southampton, isagoo dhammeeyayna ay xilli ciyaareedkii hore toddobaad, waxay leeyihiin "indhaha on bar Yurub", halka Manchester City "ayuu ku bilaabay xilli riyoodaan ee horyaalka ka dib markii ay kaalinta labaad".
taa waxaa ka duwan, Steinberg qodaa more macno galay lambarada, oo muujinaysa in Jamie Vardy ma dhaliyay kaliya 24 gool, laakiin in tani ay ahayd boqolkiiba sare oo gool kooxdiisa ka badan waxaa maamula oo dhan, laakiin labo ciyaaryahan kale. Ogaanshaha sida Wordsmith shaqeeya, Dabcan, mid si sahal ah u dhigay laga yaabo inuu sidaas oo kale sameeyaan. Dhab ahaantii ma dhex raadinaya, article Steinberg ayaa dhan ayaa abuuray karin barnaamijyada a Wordsmith xirfad leh - marka laga reebo mid ka mid ah line. "Waa xilli sixir,"Ayuu xigtay Tababaraha Leicester ee sida, ka hor inta ku daray, "Xaq ah si, siiyo in kharashka xagaaga dhan £ 26.7m kala iibsiga ah ka yeellay lacago siddeedaad ugu hooseeya ". Taasi "Xaq sidaas" muujinaysaa qoraa kuwaas oo run ahaantii fahamsan waxa uu qoraal ahaan ah.
Verdict Steinberg waa qoraa wax badan ka wanaagsan a, haddii aad rabto 20 articles xog-culus 10 daqiiqo.
imtixaanka rinjiyeynta The
laptop A iga doonayo inuu ilka. "Waa in niyadda wanaagsan," Simon Colton ayaa sheegay in. Wuxuuna ogyahay sababtoo ah waa cilmiga kuwaas oo u barnaamijkii. Waxaan nahay in Museum Science ee London, halkaas oo nacas Rinjiyeynta ah, sida waxa loo yaqaan, siinayo Banaanbaxa dadweynaha. Waxaa muhiim ah in aan sameeyo ma muujiyaan ilkahayga, Colton sheegay, maxaa yeelay, wax nuurka iyaga ka dhigaa inay eegto cagaaran nacas Rinjiyeynta ah.
From my dhoola badhitaan laptop ku abuurtaa a "rimidda" ah waxa ay jeclaan lahayd in ay rinji, ku saleysan in ay niyadda. Jawiga ka timaaddaa ah "falanqaynta caadifo" of articles dhawaan Guardian, sida ay dhacdo (on reading celcelis Guardian waa Downer a, muuqata, marka laga reebo alaabta ku saabsan beerta). Yesterday nacas ahaa ee sida niyadda xun in qof iska unpainted diray; maanta waxaa la dareemayaa "positive".
Next nacasku isku dayaysa in ay rinji burush la metelay oo gacanta la metelay (run ahaantii, image ah gacanta Colton ee) shaashadda iga dambaysa. Waxay barteen in ay ka tarjumayaan ay niyadda ka shuqulkii iyo Ventura, cilmiga computer kale, Jaamacadda Brigham Young ee Utah, Xusuustana kuwa tababaran shabakad neural in la aqoonsado sifooyin dareenka of images by fadhiya kun oo qof hore ee tobanaan kun oo farshaxankiisa oo wax weyddiinaya in mid kasta la sifooyin wax kasta oo sumad yimid. Nacasku hadda og in midabada dhalaalaya fikiri niyadda wanaagsan, iyo "qalin la ukumaha lagu dhagan" abuuraan sawir in uu yahay "qabow". Marka waxaa la sameeyaa, waxaa macmalka baxay bogga la isma eedeyso makiinad. "Guud, tani waa arrin sawirka dhalaalaysa,"Waxa ay sheegtay in. "Taasi waa ok, laakiin style ayaa hoos heerka dhalaalaya halkan. Sidaas daraaddeed waxaan ahay yara xumaaday oo ku saabsan in. "
Halkan weheliyaan nala, xiiso badan laakiin aad u mashquul at iyada easel si aad u daawato, waa Sarah Jane Moon, artist ah oo la muujinayaa Royal Society of Ranjiilayaasha sawirka. Ma doonayaan in ay ilkaha soo arkee, labada. "Waxaan rinjiga ka nolol,"Ayay tidhi, "Oo aad Iskamana aamusi karo dhoola ah ku fadhiya fadhiya. Taasi waa sababta oo dhan Wehbe dhaqanka muujiyaan astaamaha arrin dabacsan. "
Nacas Rinjiyeynta waa mashiinka khaas ah, iyo xataa in yar oo caan ah, lakiin ma beenin karo in Moon ku dhowaad dhammaan of waa sababta aan ugu faraxsanahay inaan halkaan ahay. dareen The ee la rinji by qofka dhab ah, iyaga oo haysta eegto aad at iyo qabaa adiga kugu saabsan, Waa xiiso leh iyo sasabashada. Falanqaynta caadifo iyo xogta tababarka, dhanka kale, ha isku darin in wax oo view iga aan danaynayaa, iyo Wehbe dhammeeyayna ma beddeli maankayga. Moon waa la jecel yahay a, wax dhab ah, taas oo uu dareensan yahay in si toos ah sida hal qof arkay by kale. saddex dadaalka nacasku ee ay leeyihiin tayo Waxaan jeclahay, laakiin inta badan waxay u eg sawiro in soo maray nooc ka mid ah software filter. Colton ayaa shaaca ka qaaday nacasku halkan waa "si ay u bartaan si fiican u noqon" laakiin waxaan fiirin iyo u malayn: sidaas waxa?
Leo Benedictus sida ay ugu muuqato Sarah Jane Moon ...
... Iyo sida kuwaad by laptop nacas Rinjiyeynta ah. Sawir: Murray Ballard
Markaasaan ka badan qaar ka mid ah u malaynayaa. Waayo, mid wax, waxaa soo baxday in tahay waa ka farsamo badan waxaan lahaa ogaaday. "Waxaan isku dayaa inaan eegno Leo sida set ah aan la taaban karin ee muuqaalo, foomamka, midabo, metrik,"Moon sheegayaa Colton, "In ka xaqiiqda ah in in ay sanka ka heli. Sababta oo ah marka aad bilowdo in ay sameeyaan in, aad dhexda u galay waxa aad qabaa u eg sanka ah. "
"Waa maxay software ugu sameeyaa waa u burburin galeen gobollada midabka,"Colton sheegay.
"Haa, dhab ahaan,"Moon Oo Ogolaaday. "Waxaan qabaa in waxa ugu fiican Ranjiilayaasha samayn. Waxaa la leexiyo. "Dabadeed waxay ii sheegaysaa waxay jidhkeedii nooc ka mid ah" qaraabonimo "la software sida ay soo shaqeeyay dhinac.
More muhiimsan, Waxa aan aaminsanahay in waxa ma aha sida rinjiga mashiinka; waa sida aan ka arki. Moon Waxaan fahamsanahay, Waxaan qabaa. Waxay qof oo waan ogahay in uu dareensan yahay, si aan danaynayaa iyada sawirka. Laakiin waxa uu u dareemaan jecel yihiin in ay noqon nacas Rinjiyeynta ah? Ma in waxa Wehbe ay isku dayayaan in ay ii sheeg?
Verdict rinjiyeynta Moon waa doonee; Nacas ayaa weli barashada iyo ayaa qarniyo dhaqanka si ay u tagaan.
Google Translate ahaa gabal hore ee sheekooyin sayniska sax ah si ay u rumowday, iyo waa horay tobankii sano jir ah. Siyaabo badan waxa typifies meesha AI ayaa helay in ay. Faa'iido, Hubi in; cajiib ah, su'aal la'aan; laakiin weli clunky sida She'ool, inkastoo horumar weyn.
Haddii aadan u isticmaalo, u shaqayso sida tan: geli text ama web links in mid ka mid ah 103 taageereen luqadood oo aad ka heli a seconds turjumaad xunxunna dambe ee mid ka mid ah dadka kale ee. app The on your phone shakiyaan doonaa wixii aad odhan dibna u hadlo dib, turjumay (32 luqadaha taageeray); waxay bedeli kartaa qoraalka ah calaamad luuqadaha ajnebiga ah ama menu meel kasta oo aad farta ku kamarad. sharaxaad No loo baahan yahay ee sida qabow waa (waana lacag la'aan).
Google Translate waa yaab caan ah oo shukaansi. Waxyaabaha sida 'waan ku jeclahay' iyo 'Waxaad indhaha qurux badan'
Caalamka, badh bilyan oo dadku u isticmaalaan Google Translate bil kasta, inta badan kuwa aadan ku hadlin Ingiriis (taas oo ah 80% dadka) laakiin doonaya in ay fahmaan internetka (taas oo ah 50% English). "Inta badan oo ka mid ah koritaanka, oo si dhab ah ugu of our gaadiidka, ka timaadaa soo koraya ama soo baxaya suuqyada sida Brazil, Indonesia, India, Thailand,"Ayaa sheegay in Baaraaq Turovsky, oo ah madaxa maamulka wax soo saarka iyo waayo-aragnimo user ee Google Translate. Waa la yaab caan ah oo shukaansi, aad, ayuu raaciyay. "Waxyaabaha sida 'waan ku jeclahay' iyo 'Waxaad indhaha qurux badan', in aad u baahsan. "
software ayaa had iyo jeer loo isticmaalo nooc ka mid ah barashada mashiinka tirakoobka: Below internet ee qoraalka hore u turjumay - caddayn UN, documents EU - iyo Khariidadeynta suurtagalnimada of erayo iyo odhaaho gaar ah oo u dhiganta in midkiinba midka kale. Xogta dheeraad ah oo ku soo ururiyo, si fiican u helo, laakiin horumar barbareeyay off labo sano ka hor. Soon, Turovsky sheegay, waxay gayn doonaan algorithms cusub waxbarasho qoto dheer, taas oo soo saari doonaa turjumaadaha fiican ka badan.
sidaas oo kale, waxaa jira xad, oo qaarkoodna waxay u muuqdaan aasaasiga ah marka aad la hadasho turjumaan aadanaha iyo garasho sida khiyaano shaqadooda waa. Ros Schwartz iyo Anne de Freyman iskaa wax hawshan. Labaduba waa xirfad turjubaanada Faransiis / English, oo waxaan u baahan tahay laba maxaa yeelay,, si ay u xukumaan sida wanaagsan turjumidda waa aan si fiican ugu labada luqadood, waxaan u baahanahay inaan laba jeer turjumi - mar ka mid ah Ingiriisi galay Faransiis, mar mar. Google Translate dhawraa ma xusuusta ee asalka ah oo qaban karaan wax la mid ah.
Waxaan dooran marinka gaaban tiraab kala laakiin aan gaar ahaan duurjoogta ah ama maqlana tan iyo bilowgii Herzog by Saa'uul waakanaa. Translators sida caadiga ah u baahan tahay macnaha guud, sidaas darteed waxaan u sheegi Schwartz iyo De Freyman in ka timaado a sheeko American caanka bartamihii qarnigii-.
dhowr maalmood gudahood, Schwartz iyo De Freyman soo laaban fax aad u siman ee qoraalka asalka. Halkan iyo halkaas farqiyada qarkood aan ka badbaaday, laakiin marinka weli farxiyo inuu wax akhriyo, iyo macnaha ugu weyn ee ka soo gudbaya si sax ah.
Google Translate qaadataa dhowr ilbiriqsi, iyo natiijada waa labada cajiib ah oo aan ku fillayn, weirdly wanaagsan meelo, in kuwa kale weirdly xun - jeestay "ayuu" gelin "waa" oo la galayo fikradda ah in Herzog waa jacayl. mucjisooyin, caanuhu "dillaac" sida sharaxaad of geesiga. Faransiiska ayaa eraygii ku jirin in isku dareen ah "jabay" iyo "waalan" in dillaac coveys in English, sidaas De Freyman ka dhigayaa "cinglé", kaas oo ka yimaadaa dib uga Schwartz sida "waalan".
"Google Translate eegi doona itimaalka tirakoobka oo waxaad ku tidhaahdaan, maxay 'dillaac' macnaheedu?"Turovsky sharxayaa. "Oo tira, waxaa isku dayi doonaa in go'aan ka gaarto in ay ka dhigan tahay 'dillaac' ama 'waalan' ama wax alla wixii. Taasi, waayo, mashiin, waa hawl aan caadi. "Mana waa fudud aadanaha a, inkastoo aan ka heli fududaynay Quraanka. Waxaad lahaa si aad u weydiiso haddii waakanaa macneheedu noqon karaa in Herzog ahaa "dillaac" sida in jir ahaan soo gaaray. Markaas waxaad lahaa in aan u qaadan, sababtoo ah meydadka aadanaha ma samayn guud samayn in. Sidaas daraaddeed waxaad la Yaabteen lahaa wixii uu sameeyey oo macnaheedu iyo u qaadan halkii, haddii aadan hadda yaqaanaan diinta, inay tahay inuu ka dhigan tahay "waalan", maxaa yeelay, aad fahmi intiisa kale waxa aad ka akhrisan. Laakiin waxyaalahaas u samaynayso, ma Google Translate lahaa inay badan miyir, waxaan ku weydiin? Turovsky qoslaa. "Uma maleynayo waxaan ahay aqoon in ay ka jawaabaan su'aashaas."
Verdict bullseyes Qaar ka mid ah iyo howlers ka Google Translate, halka Schwartz iyo De Freyman ugu hadla oo saxda ah.
35778	3 Art iyo design, Qodobka, sirdoonka Artificial (AI), Kumbiyuutar, miyir, Dhaqanka, Features, Google, Leo Benedictus, Nolosha iyo style, Robots, Science, Technology, The Guardian-ka, UK Weekend, Weekend
← Shan ka mid ah Apps Isnasiinta Best Huawei P9 Plus Review →